Downtown duplex flat 4-6 abantu Aranda de Duero - I-Airbnb
Downtown duplex flat 4-6 abantu Aranda de Duero
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguApartamento
Apartment kwimigangatho emibini. Ngaphantsi kwegumbi lokutyela, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala kwigumbi elinye kwaye kukho indlu yangasese. I-TV kunye ne-135 sofa-bed.
Amagumbi okulala ama-2 aphezulu (enye iphindwe kabini nezinye iibhedi ezimbini ezingatshatanga kunye negumbi lokuhlambela elineshawari.
Ifakwe kwiziko laseAranda de Duero, ecaleni kweHolo yeDolophu. Ilungele ukutyelela iRibera del Duero, ukufumanisa iindawo zewayini eziphantsi komhlaba, ukungcamla iwayini, ukutya itakane elanyisayo elimnandi eligcadiweyo kwi-oveni yomthi, ukungcamla iimveliso eziqhelekileyo: isoseji yegazi, iichops, ikeyiki yeoli ...
Indawo ephindwe kabini, iCaprichos Aranda ibekwe kumbindi wedolophu yeAranda del Duero. Yindlu epholileyo ekuhonjiswe kuyo ezi zivamvo zintlanu, zifuna ngamaxesha onke ukuthuthuzela kweendwendwe. Ngamagumbi aqaqambileyo kunye nelanga, ifulethi lihlotshiswe ngendlela yanamhlanje kunye nelula, kunye nesicatshulwa esithile esincinci, apho umbala omhlophe ulawula khona, okwenza ukuba amagumbi abonakale ekhanyayo kwaye evulekile ngakumbi, ukuba kunokwenzeka.
Le ndlu inemigangatho emibini, kwaye ixhotyiswe ngokugqibeleleyo ngayo yonke into oyifunayo kwimpelaveki okanye iholide elide.
Ikhitshi inazo zonke izixhobo kunye nezixhobo eziqhelekileyo zemisebenzi eyenziwa kuyo, ngoko sinokupheka ukuziva ekhaya. Ngokubhekiselele kumagumbi, anikezela zonke iimeko zokuphumla, kwaye aphantsi kweesilingi.
Indawo yokuhlala inokuhlala ukuya kuthi ga kwi-6 abantu, kunye nabo bonke ubumnandi.
• Igumbi eli-1 eliphindwe kabini
• Ibhedi yesofa e-1 ephindwe kabini
• Ibhedi iyafumaneka
•Igumbi lokuhlambela eli-1
• Indlu yangasese enye
Abo banqwenela ukuya kwiCaprichos Aranda Apartment bekhatshwa sisilo-qabane sabo, kuba izilwanyana zamkelwa kakuhle.
Ummandla weRibera del Duero yenye yezona ndawo zibalaseleyo kwilizwe lethu kukhenketho lwewayini, ngenxa yodumo lwewayini zayo. Ungandwendwela izidiliya ezininzi kunye neendawo zewayini, kwaye, ukongeza, kwisixeko saseAranda de Duero likomkhulu leRibera del Duero Wine Route Tourist Consortium.
Kwi-Aranda de Duero sinokubona imisebenzi eyinxalenye yelifa lembali, ebanzi kakhulu kwaye ichukumisa ngokwenene. Phakathi kwezi misebenzi siyakwazi ukubona ingcwele San Pedro Regalado, i Berdugo Palace, iCawa Santa María la Real, i Monastery of Santa María de la uDavide, iCawa San Nicolas de Bari, i-Bridge Conchuela, i Puente de lo I-Tanneries okanye ii-Underground Wineries zayo ezidumileyo, ezihlala ngaphantsi kweekhilomitha ezisi-7 kwaye zakhiwa phakathi kwenkulungwane ye-12 kunye neye-18.
Singakwazi kwakhona ukutyelela, kwisixeko, iMyuziyam yaseCasa de las Bolas, iMyuziyam kaloliwe, iMyuziyam yeCeramic okanye iZiko lokuTolika loBugcisa obuDityaniswe neWayini. Kwaye, kwiindawo ezizungezile, abalandeli be-archeology okanye imbali baya kukwazi ukucinga ngesixeko saseRoma saseClunia Sulpicia.
Indawo ephindwe kabini ibekwe kumbindi weAranda de Duero, kwesinye sezona zitrato zinembali kwidolophu yakudala. Ukusuka kwifestile yegumbi lokuhlala unokubona iHolo yesiXeko kwaye wonwabele umbono ongabekekiyo wayo yonke iminyhadala eyenzekayo eAranda, efana neSonorama Ribera, uMnyhadala wokuVuna, iminyhadala yabangcwele ...
Kukho imivalo, iikhefi kunye neeresityu kumzuzu omnye ukusuka kwindlu.
Umbuki zindwendwe ngu- Apartamento
Ndihlala edolophini kwaye ndiyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo okanye iingxaki ezinokuvela
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Aranda de Duero